ग्रीन टी: किन, कसरी, कति र कहिले पिउने ? | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
ग्रीन टी: किन, कसरी, कति र कहिले पिउने ?
ग्रीन टी अन्य चिया जस्तो पकाएर पिउनु हुन्न । ग्रीन टी छुटै गिलासमा हाल्ने र त्यसमा उमालेको पानी हाल्नुपर्छ । यसमा चिनी मिसाउनु हुँदैन । बरु, मह मिसाएर सेवन गर्न सकिन्छ । ग्रीन टी गर्भवती, न्युन रक्तचाप भएकाहरुले खानु त्यती उपयुक्त हँदैन ।-अनलाइनखबरबाट